News Collection: महानायक आत्मालोचित
बल्ल यतिबेला महानायक राजेश हमाल विहे र करियरबारे आत्मालोचित हुन थालेछन् । बूढेसकालमा बिहेको आवश्यकता महसुस भएको बताउन थालेका उनी राम्रा सिनेमा खेल्न नपाएकोमा पनि आत्मालोचित भएछन् । 'हो ! राम्रा फिल्म गर्न पाइरहेको छैन' मेरोसिनेमासँग हमालले गुह्य कुरो खोले 'सबैले फिल्म गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गर्छन् उनीहरुको आग्रह टार्न नसक्दा आफैले राम्रा फिल्म खेल्ने मौका मिस गरिरहेको छु ।' अरुको आग्रह टार्न नसक्नु आफ्नो कमजोरी पनि हमालले औंल्याउन थालेछन् ।
चालिस वर्ष कटेपछि करियरबारे चिन्ता लाग्नु स्वभाविक पनि हो । जुन चिन्ताले अहिले महानायकलाई सताइरहेको छ । संख्या बढाउन मात्रै आफ्नो भूमिका केन्द्रित भएको बारे हमाल आफैलाई थाहा छ तर उनी यसबारे निरिह छन् । खासगरी फर्मुला र सस्ता फिल्मले उनलाई व्यस्त बनाइरहेका छन् । 'यत्तिको उमेर भैसक्यो, चाहना हुँदाहुँदै पनि राम्रा फिल्म गर्न सकेको छैन' हमाल भन्छन् 'खाल्ली एउटै भूमिका र एउटै टे्रन्डका फिल्म खेल्दा खेल्दा वाक्कै भइसकें ।'
हुन त उनलाई परम्परागत ट्रेन्डबाट अलग तुल्याउन एकाध निर्देशकले प्रयास पनि नगरेका होइनन् तर 'नानीदेखि लागेको बानी' भनेजस्तै राजेश पुरानै भूमिका र लुक्समा फर्किए । अब राम्रा फिल्म कहिले खेल्ने र कहिले बनाउने हुन् उनी स्वयमलाई पनि पत्तो छैन । आठवर्षदेखि फिल्म निर्देशन गर्छु भनेर आफैले बोलेको कुरा लागु गर्न नसक्ने हमालले बढ्दो बूढेसकालमा कहिले नेपाली फिल्मलाई उँभो लगाउने हुन् ? बेलैमा काम नगर्दा सँधै आत्मालोचित भएर बस्नुपर्ने परिस्थिती हाम्रा महानायकलाई नआउला भन्न सकिन्न ।